Filoha Hery Rajaonarimampianina : Manameloka ny fanonganam-panjakana -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloha Hery Rajaonarimampianina : Manameloka ny fanonganam-panjakana
23/04/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Taorian’ny korontana sy savorovoro ka namoizana ain’olona sy nandratrana ny mpiray tanindrazana, ny sabotsy 21 aprily teo, tetsy Analakely, dia nanao fanambarana ho an’ny vahoaka malagasy ny Filoham-pirenena, Hery Rajaonarimpianina, omaly, teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha.
Araka izany, miantso ny vahoaka malagasy rehetra ho tony ny Filohan’ny Repoblika tamin’ny fanambarana nataony. Notsindriany ihany koa fa mandala sy miaina ny demokrasia i Madagasikara ary miendrika fanonganam-panjakana tsotra izao ny nitranga ny sabotsy 21 avrily teo. Noho izay indrindra, nambarany fa tokony hiara-manaiky ny rehetra fa tsy vahaolana ho an’ny ho avin’ny firenena, na oviana na oviana ny fanonganam-panjakana.
Notsiahiviny ihany koa ny lalan’ny firenena nanomboka ny taona 1972 hatramin’ny 2009, izay nisian’ny savorovoro sy korontana eny an-dalambe. Nambarany fa an-jatony ireo malagasy mpiray tanindrazana namoy ny ainy, naratra sy nitondra takaitra tamin’izany. Tsy hita pesipesenina, hoy izy, ny fatiantoka naterak’izany teo amin’ny toe-karem-pirenena sy ny fihariana ary ny asa. Noho izay, voalaza fa mbola iainantsika mandraka ankehitriny ny takaitra navelan’ireny korontana sy savorovoro ireny, ary ny fanarenana izany indrindra no imasoan’ny Fitondram-panjakana amin’izao fotoana izao. Betsaka ny ezaka natao, hoy ny Filoha, ary mbola maro ihany koa ny miandry sy tsy maintsy hotohizana hanamaivanana ny fahasahiranan’ny vahoaka.
Nambarany fa tany tan-dalàna i Madagasikara ary mampitandrina ireo mpamboly korontana sy mpanentana ny mpiara-belona hifandrafy ka mikatsaka ny hisian’ny rà mandriaka sy hamoizana ain’olona indray, ary hitondran’ny mpiara-belona takaitra ny Filoham-pirenena. Noho izay indrindra, hentitra ny Filoha nanambara fa tsy maintsy handray ny andraikitra sy fepetra hentitra mifanandrify amin’izany ny Fitondram-panjakana.
Nanambara ihany koa ny Filoha fa ireo mpitandro filaminana dia hijoro marindrano amin’ny fitandroana ny ara-dalàna sy ny rafitra demokratika izay misy, ary hanatanteraka hatrany ny adidiny amin’ny fiarovana ny ain’ny olona sy ny fananany.
“Aoka tsy hatao sorona intsony ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana, ary aoka hitsinjo hatrany ny tombontsoan’ireo Malagasy an-tapitrisany izay tsy miandrandra afa-tsy ny fandrosoana sy ny filaminana”, hoy izy.
Ankoatra izay, nitodika tamin’ny mpanao gazety ihany koa ny Filoham-pirenena ary nanao antso avo. “Aoka tsy hohadinoinareo ny maha masina ny asanareo eo amin’ny fitaizana ny olona sy ny fampitam-baovao. Aoka ianareo tsy ho fitaovana handranitra korontana na sanatria hanentana ny vahoaka tsy hanara-dalàna sy hikomy. Aza hadinoina fa mpanabe ny vahoaka ianareo”, hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.
Amin’ny maha Filoham-pirenena azy, nambarany fa hitsinjo hatrany ny tombontosa ambonin’ny firenena, olona mpandala ny fifanankalozan-kevitra rahateo ihany koa ny tenany.
Na izany aza, tsy nohadinoin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ny nankahery ny fianakavian’ireo namoy ny ainy sy nirary soa ireo maratra sivily sy mpitandro filaminana.
Lasibatry ny fanaratsiana indray ny vadin’ny filoham-pirenena ankatok’izao fanamarihana ny andron’ny 8 Marsa izao. Rehefa halalinina ilay fanaratsiana, dia mihodinkodina teo amin’ilay “vava be” navoakan-dRavalomanana Marc momba ny tany etsy Antanimbarinandriana. Hotokanana amin’ny 8 ...Tohiny